Mogadishu Journal » 2019 » October » 28
Koox hubeysan oo weerartay magaalada Boorama’
Mjournal :-Wararka ka imaanaya magaalada Boorama ee Jamhuuriyadda Iskeed ugu dhawaaqday Madaxbanaanida ee Somaliland ayaa sheegaya in saaka dabley aan heybtooda la garaneyn ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidammada ee ku yaal halkaas. Booliska iyo kooxdii weerarka soo qaaday ayaa...
Ra’iisal Wasaare Khayre oo qaabilay Wafdi ka socda QM
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergayga gaarka ah ee xogyahaya guud ee qaramada midoobay, u qaabishan caruurta iyo khilaafaadka hubeysan, Virginia Gamba de Potgieter. Kulanka dhex mar...
Dowladda oo furtay xafiiska qorshaha xalka waara ee Barakacayaasha
Mjournal :-Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa maanta furay xafiiska isku dubba ridka qorshaha xalka waara ee qaxootiga iyo barakacayaasha. Wasiirka wasaaradda Qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta...
Wararkii ugu danbeeyay Doontii ku tagtay magaalada Beledweyne
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Doontii saakay Mas’uuliyiin ka tirsan Gobolka Hiiraan iyo dad shacab ahaa kula gadoontay Fatahaada ka dhalatay Biyaha Wabiga Shabeelle. Doonta ku rogmatay Biyaha Webiga ayaa waxaa la socday Duqa Degmada Baladweyne Safiyo Xasan Cali...
Finland oo Somalia ugu deeqday lacag gaareysa 8.9 Milyan oo Dollar
Mjournal :-Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Finland ayaa ku dhawaaqday $ 8.9 milyan oo dheeri ah oo loogu deeqay Soomaaliya,iyadoo loo sii marsiinayo Bangiga Aduunka oo saaxiib dhow la ah Soomaaliya. “Waxaan ku qanacsanahay horumarka ballaaran ee lagu sameeyay hay’adaha kala duwan...
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ku sii jeeda Dhuusamareeb
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa inuu gaaro magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, halkaasoo maalmihii la soo dhaafay ka taagneyd xiisad siyaasadeed oo ku aadan hannaanka loo dhisayo maamulka Galmudug oo ay isku khilaafsan yihiin Ahlusuna iyo...
Kenya is seeking international help to stop informal finances to Al Shabaab terror group that remains active despite military operations. Kenya’s High Commissioner to the UK Manoah Esipisu said regional and international partners must join hands with the federal and regional...
Gaadiidleyda BL-ka oo maalintii saddexaad dibadbaxyo ka wada Muqdisho
Mjournal :-Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa maalintii saddexaad Banaanbaxyo ka wada Darawalada gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya Muqdisho. Qaar kamid ah gaadiidleyda oo la hadlay Idaacada Dalsan ee Magaalada Muqdisho ayaa u sheegay inay ka...
Mas’uuliyiin ka tirsan Gobolka Hiiraan oo Doon la degtay
Mjournal :-War Goordhow soo gaaray Idaacada Dalsan ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegayaa in Mas’uuliyiin ka tirsan Gobolka Hiiraan ay Doon kula degtay Fatahaada ka dhalatay Biyaha Wabiga Shabeelle. Doonta degtay ayaa waxaa la sheegayaa inay la socdeen Mas’uuliyiin ay...
Mjournal :-Qarax ayaa saaka ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan halka ay iska gooyaan wadooyinka Taleex iyo Maka Al-Mukarama kaasoo khasaare uu ka soo gaaray haweenka ka shaqeeya nadaafada. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhashay miino la sheegay in lagu dhax qariyay...